Ninka wax-dhal ku noqday 70-jir oo ka cararaya ilmihiisa! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka July 24, 2017	0 265 Views
Serbia (Himilonews) – 60-jirta Atifa Ljajic iyo seygeeda, Serif Nokic oo 68-jir ah kuna nool dalka Serbia waxay isku dayi jireen helidda cunug ay dhalaan muddo 20 sano ah. Markii qofna uusan rumeysan in hadda kadib ay wax dhalayaan, tii Alle ayaa timid. Atifa waxay goor dhawayd dhashay gabar caafimaad qabta, hayeeshe isla maalintiiba, seygeeda ayaa isaga dhaqaaqay – isaga oo yiri; da’dan inaan ubad ku koriyo waxay halis u tahay caafimaadkayga.